FBSမှ CFI၏ 'အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင် အာရှ ၂၀၁၈' ဆုလက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေး မဂ္ဂဇင်းမှ FBSအား အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင် အာရှ-၂၀၁၈ အတွက် ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် အားစိုက်ထုတ်ခဲ့သည့် သက်သေဖြစ်သည့်အတွက် အကောင်းဆုံး Forex အကျိုးဆောင် အာရှအဖြစ် ဆုချီးမြှင့်ခံရသည့်အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ FBS အား ကျွန်တော်တို့ဖောက်သည်များအတွက် မြန်ဆန်မှု၊ အရည်အသွေးနှင့် အဆင်ပြေစေရေးတို့မှာ သာလွန်စေချင်ပါတယ်။ သိရသလောက်၊ အာရှမှာရှိတဲ့ ဖောက်သည်များက အားစိုက်ထုတ်မှုကို ကျေနပ်ခဲ့ကြပြီး၊ ခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အာရှဈေးကွက်ဦးဆောင်သူတွေထဲမှာ တရားဝင်ရပ်တည်နေပါပြီ။
ဒါဟာ CFI.co ကနေ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆုရရှိတာမဟုတ်ပါဘူး - ယခင်က မဂ္ဂဇင်းမှ FBS အား ဖောက်သည် အကောင်းဆုံးဆု ငွေကြေးလုံခြုံမှု (အာရှ)၊ အကောင်းဆုံး FX ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေတွေကို စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အကောင်းဆုံး FX IB ပရိုဂရမ်၊ နှင့် ဆုများစွာချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
FBS အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုကို ချဲ့ထွင်ရန် ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုကို စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးမြှင့်နေပြီး၊ အကောင်းဆုံး အရောင်းအဝယ်များ၏ နေရပ် - အာရှနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်လာပါပြီ!
စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ အကျိုးဆောင်နှင့် ရောင်းဝယ်ပြီး၊ သင့်ငွေကြေးအောင်မြင်မှုအတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်အားထားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!